Rehefa Sady Mainty ianao no Vahiny Ao Brezila: Mizara ny Tantarany Ny Afrikana Iray Mpianatra ho Mpitsabo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Desambra 2016 3:28 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, English
Fleury Johnson, avy any Togo, nadritry fitsangantsanganana an-tongotra tao Rio de Janeiro, Brezila. Famoahana nahazoana alàlana.
Ny 2011, fony i Fleury Johnson nanapaka hevitra ny handao ny tany nahaterahany ao Lomé, Togo, ho any Rio de Janeiro mba hianatra ho mpitsabo, dia hevitra nitovy tamin'izay efa nananan'ny ankamaroan'ireo vahiny maro koa no tao an-tsainy. Nihevitra izy fa olona miramirana sy mahafinaritra ry zareo Breziliana ary manana fijery miabo momba ny fiainana. Fantatr'i Johnson fa nisondrotra ny toekaren'ilay firenena, saingy mbola miatrika olana mitovitovy amin'ny ao Afrika ny vahoaka ao aminy. Fa indrindra indrindra, nihevitra izy fa tsy misy fanavakavahana ao Brezila, ary mirindra ny fiaraha-miaina eo amin'ireo mainty sy fotsy any an-toerana.
Tsy nihevitra mihitsy ilay mpianatra, 24 taona, hoe hahita fifohazana mitratrevatreva tahaka izany, indrindra raha fanavakavahana ao Brezila no resahana.
“Tohina tokoa aho raha vantany vao tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Guarulhos ao São Paulo. Tsy nisy afa-tsy fotsy, ary nanontany tena aho raha toa ka ao Brezila marina tokoa,” hoy izy tamin'ny Global Voices.
Ny 2016, raha mbola vao misasaka ny làlany haka ny diplaomany ho mpitsabo ao amin'ny Anjerimanontolo Federalin'i Rio de Janeiro (iray amin'ireo tena manandaza indrindra ao amin'ny firenena), nanapaka hevitra i Johnson fa hanomboka hanoratra bilaogy momba ny fiainany ao Brezila, amin'ny teny Portiogey, izay efa misosa tokoa ny fiteniny azy ankehitriny. Karazana fanoratana bilaogy amin'ny fomba malalaka no ataony, izay miainga amin'ny endrika efa nivoaka tany amin'ny folo taona lasa tany, manoratra saika momba ny zavatra rehetra, ny fitsangatsanganana an-tongotra mitety an'i Rio de Janeiro ka hatramin'ny dikan-javatra amin'ny anarana Afrikàna. Mampangetaheta azy manokana ny hampianatra ireo Breziliana momba ilay tanibe fonenany, ary manokana amin'izany i Togo firenena niaviany.
Saingy ny lohahevitra nitazona manokana ny mpamaky azy dia ny dona nahazo azy noho ny fanavakavahana natrehany, hatramin'ny niampitàny ny ranomasimbe Atlantika.
Tamin'ny Jolay, nparitaka be ilay lahatsorany nomeny lohateny hoe “Brezila vs.Zavamisy“, ary im-betsaka nisy namerina namoaka azy io ireo mediam-bahoaka ka niteraka fanehoankevitra marobe dia marobe. “Nifandray tamiko ny olona sasany hilaza amiko fa te-hampiasa ilay lahatsoratro ry zareo amin'ny fanohanany ny voka-pikarohany hakàna ny diplaoma Maitrise sy Doctorat, izay zavatra tena nahafaly be ahy tokoa”.
Tao anatin'ilay lahatsoratra, nosoritan'i Johnson ny niatrehan'izy tenany ny fanavakavahana tao Brezila, toy ny fanandramana mba hisoratra anarana ho mpiana-draharaha tao amin'ny hopitaly iray, ka tamin'izany no nampisalasala ilay mpitantana ny momba azy raha toa ka tena mpianatra ho mpitsabo tokoa. Indray mandeha, nisy marary iray nandà ny tsy hokarakarain'i Johnson noho izy mainty. Ary tsy vitsy ireny zavatra niainany ireny eny anivon'ireo olona mainty mianatra ho mpitsabo ao Brezila, hoy i Johnson.
“Taorian'ny nielezan'izay lahatsoratra izay, marobe irao Breziliana tanora mainty hoditra naniry ny hianatra ho mpitsabo no nifandray tamiko, tamin'ny filazàna hoe aingam-panahy ho azy ireo aho”.
Miavaka ihany koa ny bilaogin'i Johnson amin'ireo fitantarany ny anjara toerana raisin'ny maha-mainty hoditra sy maha-vahiny anao amin'ny fizotry ny fiainana andavanandro. Ny lova navelan'ny varotra andevo niampita an'i Atlantika ho any Brezila efa ho 300 taona mahery tany aloha mifangaro amin'ny toerana misy ilay firenena ao anatin'ny tontolo andalam-pivoarana, izay ny fahalalahan-tsainy sy ny fahalinany amin'ireo vahiny no toetra ahafantarana ireo Breziliana.
Namaritra ity tranga ity tao amin'ny bilaoginy i Johnson :
Ato an-trano, ireo namako (mainty hoditra daholo) dia niteny taminay mba hitafy tsara rehefa mandeha any amin'iteo toeram-pivarotana goavana. Ny fotoana voalohany nanaovako akanjo tsy dia manao ahoana loatra, niampita haingana ny arabe ilay ramatoa teo anoloako. Taorian'izay, hitany fa niditra tao amin'ilay toeram-pivarotana goavana aho, niditra tao koa izy, ary nandeha niresaka tamiko satria tsapany fa handeha hiantsena fotsiny aho. Avy eo tsapany tamin'ny lantompeoko fa vahiny aho ary dia taitaitra ny hiresaka be ramatoa. Alaivo sary ao an-tsaina ny fomba mety hitondràna ireo olona mainty hoditra avy any amin'ny favela.
Teo am-pamelabelarana momba io ampahany io, nolazain'i Johnson tamin'ny Global Voices hoe :
Heveriko fa fijery hafa mihitsy no hijerena ireo mainty hoditra mpivahiny raha alahatra amin'ireo Breziliana mainty, satria manana lantompeo hafa izahay, miteny fiteny hafa, ary tian-dry zareo Breziliana izany. Mizàka fitsaratsaram-poana izahay mandra-pisokatry ny vavanay. Rehefa fantatr'izy ireo fa vahiny izahay, adinon-dry zareo ny lokon-koditray ary dia liana kokoa amin'ireo tantara sy zavatra niainanay azonay lazaina ry zareo
Faritan'i Johnson ihany koa ny fotoana iray izay niheveran'ny Breziliana namana iray hoe ny fenitry ny hatsarantarehy Breziliana (izay mazàna no idiran'ny fanasongadinana ny lokon-koditra fotsy sy volo malama) no fenitra ‘manerantany’.
Tany amin'ny 2012 tany, nanontany ahy ny namana iray raha nahafantatra izay fanjakana Breziliana misolo tena ny firenena aho amin'ny resaka ‘fenitry ny hatsarantarehy’. Nihevitra aho hoe : “Mainty kokoa ny ao Bahia, araka izany dia i Bahia.” Tsia no navaliny. Dia noheveriko indray ho i Rio de Janeiro, izay fanjakana mainty indrindra aorian'i Bahia. Hoy izy, “Tsia, i Rio Grande do Sul sy Santa Catarina” [fanjakana Breziliana roa any atsimo izay nahazo betsaka avy amin'ny fifindramonin'ireo Alemàna tany ampiandohan'ny taonjato faha-20, nahatonga ny vahoaka ao aminy ho ‘fotsy kokoa’ noho ny ankamaroan'ny Breziliana tsotra]. Niteny koa izy hoe, “Izany no fenitry ny hatsaràna manerantany.” Dia nitohy lasa saina aho: Marina ve? Tontolo inona no niainako no tsy mba nahafantarako izany? […] Efa nitsidika firenena fito aho tao Afrika, ary azoko antoka fa ao Afrika mainty, ny fenitry ny hatsaràna dia ilay iray hafa tanteraka. Tsara tarehy ny fanànana volo midokodoko, molotra fenofeno, ary orona mivelabelatra.”
Mety ho liana amin'ny vahiny ry zareo Breziliana, saingy asongadin'i Johnson ihany koa ny tsy fahalalàna ankapobeny misy eo amin'izy ireo momba an'i Afrika. Ho azy, mety ho zavadehibe kokoa ho an'ireo Breziliana ny fahafantarany an'i Afrika avy amin'ireo Afrikàna, fa tsy ny Eoropeana, izay manome ity firenena ity ny vaovao azony avy amin'ny ankamaroan'ny toerana manerana ny lafivalon'izao tontolo izao.
Hoy izy mantsy ny Global Voices:
Marobe ny Breziliana no tsy mahafantatra an'i Togo. Mampalahelo izany, noho i Brezila manana fifandraisana marobe ara-tantara amin'i Togo. Maro [ny razamben’] ireo Breziliana mainty hoditra no avy any Togo, ary maro no niverina nankany Togo taorian'ny nanafoanana ny fanandevozana [tamin’ 1889]. Ny filoha voalohany tao Togo dia taranaka Breziliana iray. Heverin'ireo Breziliana izahay fa miaina anaty fahantrana tanteraka, ary be no mihevitra fa tsy manana seranam-piaramanaidina izany izahay any an-toerana. Betsaka ny olona mihevitra fa fahantrana sy ady fotsiny no misy any Afrika, ary heverin-dry zareo fa firenena tokana ihany no misy any. Na hoe Afrika dia firenena iray ao anatin'i Angola, na Togo dia firenena iray ao anatin'i Angola. Marina fa misy any ny ady sy ny olana, saingy tsy any amin'ny firenena tsirairay kosa. Samy manana ny fitantanany sy ny rafitra azy manokana ny tsirairay, toy ny aty Amerika Atsimo, izay samihafa amin'i Brezila na i Bolivia i Arzantina.
Tsipihan'i Johnson fa satria vahiny izy no antony iray tena mety mahatonga ny lahatsorany ho niparitaka be. “Antenaiko hiditra ao anatin'ny kajy ihany koa ny fanehoam-pijery momba ireny olana ireny avy amin'ireo Breziliana mainty hoditra,” hoy izy.
Dia inona indray ny manaraka ho an'i Johnson? Maminavina ny hiverina any Togo izy rehefa vita ny fianarany, na dia betsaka amin'ny endri-piainana Breziliana aza no ankafiziny: ny olona, ny fifaliana, ireo kolontsaina maroloko ary ny tontolo manodidina mahafinaritra. Saingy manahy izy momba izay karazana hoavy mety hiandry ny zanany raha ao Brezila. “Tsy tiako ho loharanonà hadrohadro ny volony na ny toetenan'izy ireo ety ivelany rehefa mandeha an-tsekoly ry zareo,” hoy izy.